Latuda mhedzisiro uye maitiro ekuzvidzivirira | SingleCare - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Zvinodhaka Vs. Shamwari Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Wellness Nharaunda, Wellness Checkout Kambani, Info Info Kambani, Iyo Checkout Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Hutano Kambani Zvinodhaka Info Dhinda Kambani, Nhau Dzidzo Yehutano Info Info, Hutano Dzidzo
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Latuda mhedzisiro uye maitiro ekuzvidzivirira
Latuda mhedzisiro | Kurera huremu | Kurega | Inotora nguva yakareba sei mhedzisiro? | Yambiro | Kudyidzana | Maitiro ekudzivirira mhedzisiro
Latuda (chinhu chinoshanda: lurasidone hydrochloride) izita-zita atypical antipsychotic inogamuchirwa kurapa schizophrenia muvachiri kuyaruka nevakuru uye kurapa kushushikana muvakuru nevana 10 kana vakuru vakaonekwa vane bipolar disorder. Inogona zvakare kusanganiswa ne lithiamu kana valproate yekurapa bipolar kushushikana muvakuru. Lurasidone, chinhu chinoshanda muLatuda, chinokanganisa chiitiko che dopamine neserotonin, makemikari anobatsira kupfuudza masaini pakati pemitsipa. Kunge mishonga yese inoshandura kemikari yehuropi, Latuda inogona kuburitsa mhedzisiro, ichikanganisa mamwe mamiriro ekurapa, uye kuyanana nemimwe mishonga.
RELATED: Dzidza zvakawanda nezveLatuda | Tora Latuda discounts
Zvakajairika mhedzisiro mhedzisiro yeLatuda
Kufanana nemishonga yese, Latuda inogona kukonzera madiki kana kwenguva pfupi mhedzisiro. Vanopfuura mumwe muvanhu makumi maviri uchaona mhedzisiro dzakadai sekurara, kusvotwa, kugadzikana kusagadzikana, kugumbuka mudumbu, kana kufamba kusingaite.
Mune varwere vanotora Latuda, iyo yakajairika mhedzisiro mhedzisiro inonzi:
Akathisia (chisingadzivisike chishuwo chekufamba)
Extrapyramidal zviratidzo (kudedera, kubvunda, kufamba kusingaite, kudonhedza mvura)
Zvakaoma kufamba kana kunonoka kufamba
Mazhinji mhedzisiro mhedzisiro-yakaenzana-iyo yakakwira iyo dosi, inowedzera njodzi uye kuomarara kwemhedzisiro mhedzisiro. Tsvaga zano rekurapa kana iwe ukawana chero madiki madiki mhedzisiro paunotora Latuda.
Yakakomba mhedzisiro mhedzisiro yeLatuda
Yese antipsychotic mishonga inogona kukonzera zvakakomba uye kwenguva refu-mhedzisiro mhedzisiro. Akakomba Latuda mhedzisiro anosanganisira:
Shanduko yeMetabolic inokonzeresa mushuga yeropa yakakwira, triglycerides yakakwidziridzwa, cholesterol yakakwidziridzwa, yakaderera ropa re sodium, kana chirwere cheshuga
Kupera mumasero machena eropa
Neuroleptic yakaipa malignant
Kufanana nemimwe mishonga yekurapa chirwere chepfungwa, Latuda inogona kukonzera shanduko yemagetsi uye kuwedzera huremu, asi izvi hazviite uye zvishoma kudomwa kupfuura nemishonga yakafanana. Latuda inogona kunge isiri iyo chaiyo mishonga kune vanhu vane mhuri nhoroondo yeshuga kana metabolic syndrome.
Mishonga yese inorwisa kupfungwa inokanganisa kugona kwemuviri kugadzirisa tembiricha yemuviri. Nekuda kweizvozvo, vanhu vanotora Latuda vari panjodzi yekuwedzera yeheatstroke (hyperthermia), chirwere chinogona kutyisidzira hupenyu. Yambiro inofanirwa kutorwa kunzvenga inopisa mamiriro ekunze kana overexertion kana uchitora Latuda.
Latuda inowedzera njodzi yekuzviuraya pfungwa uye hunhu muvana, vachiri kuyaruka, uye vechidiki kurapwa kurapwa bipolar kushushikana. Kana uchipa Latuda yekushungurudzika, zvakakosha kuti utarise zviratidzo zvekuzviuraya zvinosanganisira:
Kufunga kuzviuraya kana kutaura
Kuwedzera kuora mwoyo
Maitiro ekutora njodzi
Mimwe mhedzisiro yakakomba mhedzisiro uye matambudziko kubva kuLatuda uye kunyanyisa kushandisa antipsychotic zvinodhaka zvinosanganisira:
Mazhinji mishonga yekurapa chirwere chepfungwa inoderedza chikumbaridzo chekubata, ichiisa varwere panjodzi yekuwedzera yekubatwa nekuda kwezvimwe zvikonzero. Mumakiriniki ekuedzwa , varwere vanotora Latuda vaive nemutengo wakaderera kwazvo wekubata, zvichiita kuti Latuda ive nenjodzi yakaderera mishonga yekukonzeresa pfari. Nekudaro, iyo inogadzira, Sunovion Pharmaceuticals Inc., inopa zano kuti Latuda ishandiswe nekuchenjerera kune varwere vane nhoroondo yekubatwa.
zvakasikwa nzira dzekubvisa nzara fungus
Pakupedzisira, Latuda inomutsa njodzi yekurohwa uye kufa kwevarwere vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu vane kushushikana kwepfungwa. Neichi chikonzero, Latuda haina kubvumidzwa kurapa kuora mwoyo kwakanangana nehupfungwa.
Latuda kuwedzera uremu
Antipsychotic mishonga inowanzo kukonzera shanduko yemetaboli uye kuwedzera uremu semhedzisiro isingadiwe, asi kukura kwehuremu hunosiyana nemushonga. Nekudaro, zvinoenderana neyeyeyeye kiriniki kuyedzwa yakanyorwa pamusoro, Latuda inowona pazasi magumo, zvichikonzera avhareji kuwedzera uremu hweinenge pondo imwe munguva pfupi-uye anenge maviri mapaundi mune yakareba-gore (gore rimwe). Around 4.8% yevarwere mune ino muyedzo vakawana zvinopfuura 7% yehuremu hwemuviri maringe ne3.3% avo vaitora placebo.
Zvinoreva zvese izvi ndezvekuti njodzi yekuwedzera huremu kana uchitora Latuda yakaderera pane zvazviri nemamwe antipsychotic. Izvi zvinokonzerwa nemhedzisiro isina kusimba yaLatuda pane mamwe marudzi emitsipa receptors ayo mamwe mishonga yekurapa nepfungwa inobatana nayo. Nekuda kweizvozvo, mhedzisiro senge kuwedzera uremu, kudedera, uye orthostatic hypotension haina kujairika uye haina kusimba zvakanyanya kupfuura mamwe antipsychotic zvinodhaka. Nekudaro, iye mugadziri anorayira kuti huremu hutariswe zvakanyatsonaka pakutora Latuda.
Iko hakuna kutsvagurudza kana kiriniki miedzo inotarisa pakubvisa zviratidzo zveLatuda, kunyangwe paine mishumo yekubviswa kweLatuda. Kana iwo mugadziri kana iyo Chiremba's Desk Referensi inotsanangudza kudzoreredza semhedzisiro mhedzisiro kana kukurudzira tapered dosing regimen kana uchirega Latuda.
Nekudaro, antipsychotic zvinodhaka zvinoshanda nenzira imwechete seLatuda, inonzi dopamine vanopikisa, inogona kukonzera zviratidzo zvekuregera kana yarega, asi havazi vese varwere vanozoona mhedzisiro yekubvisa pavanoregedza antipychotic antipychotic. Izvo izvo zvinoita zvinogona kuve nehuremu kana hwakanyanya hwezviratidzo zvekudzora. Kunyange zvakadaro, iyo American Psychiatric Association inokurudzira kudzikisa dosi ne10% pamwedzi wega wega kana kurega mishonga inorapa kutapurika kuti uderedze njodzi yekubvisa kana chiratidzo chekuwedzera.
Chiratidzo chinowanzozivikanwa chekusiya kana kurega antipsychotic chiratidzo chinowedzera. Kana murwere anga asina chiratidzo kwechinguva, kudzoka kwezviratidzo kunogona kutaridzika zvakanyanya kupfuura kare kurapwa. Zvimwe zviratidzo zveantipsychotic kubvisa zvinosanganisira kusazvibata, kukwenya, kufamba zvishoma, kumanikidza kufamba, kuda kurutsa, kurutsa, manyoka, uye kurwadziwa nemudumbu. Anopa hutano anogona kupa mishonga yaPasinson yekudzora antipsychotic kubvisa.
Latuda mhedzisiro mhedzisiro inogara kwenguva yakareba sei?
Mhedzisiro inogona kugara sekureba sekutorwa kwaLatuda, asi mamwe madiki mhedzisiro anogona kudzikira nekufamba kwenguva. Mushure mekurapwa kwenguva refu, Latuda inotora nezve mazuva maviri kusvika mana kujekesa zvakakwana kubva mumuviri. Zvikuru zvidiki uye zvimwe zvakakomba mhedzisiro mhedzisiro zvinotanga kugadzirisa nezve inguva iyoyo. Nehurombo, zvimwe zvakakomba mhedzisiro zvinogona kutora nguva yakareba kuti zvigadziriswe uye zvimwe, senge tardive dyskinesia, inogona kunge isingadzoreke.
Latuda inopesana & yambiro
Latuda inouya neiyo FDA nhema-bhokisi yambiro yekuti haifanirwe kushandiswa kurapa dementia-inoenderana nepfungwa dzepfungwa nekuda kwenjodzi yekufa kana kurohwa. Latuda haifanirewo kutorwa na:
Vanhu vane allergiki kune lurasidone kana chero chipi zvacho chisingashandi zvigadzirwa
Vanhu vanotora zvinodhaka kana zvinhu zvinokanganisa zvakanyanya muviri metabolism we lurasidone
Dzimwe yambiro dzinosanganisira:
Yakadzika chena masero eropa kuverenga
Pfungwa dzekuzviuraya kana maitiro
Yakawanda shuga yeropa, mafuta, kana cholesterol
Latuda inobata vachiri kuyaruka 13 uye vakuru kune schizophrenia uye vana nevechiri kuyaruka vakura kupfuura gumi bipolar kushushikana. Kuchengetedzwa kwaLatuda hakuna kumbobvunzwa muvana vadiki pane gumi.
Kana ichishandiswa kurapa bipolar kushushikana, Latuda inokwidza mungozi yekuzviuraya pfungwa uye hunhu muvana nevechiri kuyaruka. Vana nevarwere vadiki vanofanirwa kuongororwa nekuda kwekuwedzera kushushikana kana zviratidzo zvekuzviuraya.
Iko hakuna kuongororwa kwekuchengetedza kwekushandisa kweLatuda mune vakadzi vane nhumbu kana vanaamai vanoyamwisa. Iko kune anecdotal humbowo hwevacheche vane kusagadzikana kwekufamba uye zviratidzo zvekusiya apo antipsychotic inotorwa mune yechitatu trimester yepamuviri. Latuda inogona kuvigwa mumukaka wemukaka, asi iyo chaiyo mari haina kutarwa. Sezvimwe nechero mishonga yekurapa mupfungwa, vakadzi vanofanirwa kukurukura zvayakanakira nezvayakaipira kutora Latuda paunenge uine pamuviri kana ukoti.
Kuchengetedzwa kweLatuda muvanhu vane makore anodarika makumi matanhatu nematanhatu hakuna kunyatso kufundwa uye neruzivo rwekutsanangura runochenjerera pakurondedzera kune vakwegura (vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira). Naizvozvo, sarudzo yekumisikidza mushonga uyu mune iwo makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira, uine chirwere cheschizophrenia kana bipolar kushushikana, inoitwa pane kesi-ne-kesi hwaro mukutaurirana nemubatsiri wezvehutano. Latuda inomutsa njodzi yekurohwa uye kufa kune vakwegura varwere vane chirwere chepfungwa chakanangana nehupfungwa, saka Latuda haigamuchirwe kune avo varwere.
Kune zvinodhaka zvakaita seLatuda, kusangana kwemishonga kwakaomarara uye kunovhiringidza. Kugonesa kusangana kweLatuda, mimwe mishonga haifanire kutorwa kana kutorwa nekuchenjerera nekuti vanogona:
Kukanganisa kugona kwemuviri kuputsa lurasidone, chinhu chinoshanda muLatuda kana
CYP3A4 inducers uye inhibitors
Latuda inorambidzwa kushandiswa nemishonga yakasimba CYP3A4 inducers uye inhibitors. Taura zvakapusa, iyi mishonga inokasira kuparara kwelurasidone nemuviri (CYP3A4 inducers) kana kudzivirira uye kudzora kudzora kwe lurasidone (CYP3A4 inhibitors).
Mishonga inosimudzira zvakanyanya kuparara kwelurasidone inoderedza zvakanyanya kushanda kwayo. Izvi zvinosanganisira:
Mishonga inorwisa mabhakitiriya : rifampin, rifaximin, uye rifamycin
Dzimwe mhando dzeanticonvulsants : carbamazepine, phenytoin, primidone, uye fosphenytoin
Barbiturates : pentobarbital uye phenobarbital
Dexamethasone, Lysodren (mitotane), Xtandi (enzalutamide), Erleada (apalutamide), Orkambi (lumacaftor), uye Rydapt (midostaurin)
Zvinodhaka zvinongoita zvine mwero kana zvisina kusimba zvinomhanyisa kuparara kwelurasidone zvinogona kutorwa, asi vanachiremba vangangoda kugadzirisa marapirwo kana zviyero zvemadhiza.
Zvinodhaka uye chikafu chinodzora metabolism yemuviri we lurasidone, zvisinei, zvinowedzera kuwanda kweLatuda muropa uye nekudaro kuwedzera njodzi yemhedzisiro. Iyo yakasimba inhibitors iyo isingatombofanirwe kutorwa neLatuda inosanganisira:
Muchero, curcumin, uye goridhe
Dzimwe mhando dzemishonga inorwisa mabhakitiriya : clarithromycin, erythromycin, troleandomycin, uye telithromycin
Antifungal (azole) zvinodhaka : econazole, ketoconazole, voriconazole, methimazole, uye posaconazole
Ropa rekumanikidza mishonga : diltiazem uye verapamil
Dzimwe mhando dzemishonga inorwisa hutachiona : ritonavir, atazanavir, darunavir, lopinavir, efavirenz, tipranavir, Incivek (telaprevir), Invirase (saquinavir), Rescriptor (delavirdine), Crixivan (indinavir), Vitekta (elvitegravir), Victrelis (nceperevir)
Dzimwe mhando dze immune system modulating anticancer zvinodhaka vakadai saTasigna (nilotinib), Kisqali (ribociclib) Zydelig (idelalisib), uye Rydapt (midostaurin)
Ergotamine, terfenadine, nefazodone, loperamide, cobicistat, Vaprisol (conivaptan), Diacomit (stiripentol), naloxone, danazol, uye lonafarnib
Muchero wemazambiringa une zvinhu zvakare zviri CYP3A4 inhibitors. Zvisinei, zvinhu izvi hazvivhiringidzi kukwanisa kwemuviri kugadzirisa lurasidone mumuviri, asi pane kudaro vharira maitiro akafanana mumatumbu . Izvi zvinoreva kuti muviri unotora lurasidone yakawanda kupfuura zvayaimboita, ichiwedzera njodzi yemhedzisiro. Mhedzisiro ye grapefruit pamatumbo maseru inogona kugara kwenguva yakareba semaawa makumi maviri nemana, saka grapefruit inofanira kudzivirirwa zvachose uchitora Latuda.
Latuda inzvimbo yepakati yetsinga inoshungurudza. Inodzora huropi. Iyi mhedzisiro ichawedzerwa kana Latuda ikatorwa pamwe nedzimwe nzvimbo dzepakati tsinga system depressants. Mhedzisiro yacho inogona kuve ine njodzi mumuviri. Kana zvisiri, kuneta uye kurasikirwa nemota kudzora kunogona kuwedzera njodzi yetsaona kana kukuvara. Paunenge uchitora Latuda, mamwe maCNS anodzvinyirira anofanirwa kudzivirirwa kana kushandiswa zvine hungwaru kusanganisira:
Doro, mbanje, cannabinoids, ginseng, kana Gotu kola
Antihistamines seBenadryl (diphenhydramine), doxylamine, uye pheniramine
Narcotics senge codeine, morphine, kana tramadol
Sedatives (kurara zvinoyamura) senge midazolam kana estazolam
Kunetseka mishonga senge buspirone kana diazepam
Mutsipa kurwadziwa mishonga senge gabapentin, gabapentin enacarbil, kana pregabalin
Anti-kusvotwa zvinodhaka senge metoclopramide kana ondansetron
Anticonvulsants senge carbamazepine ( zvinopesana ), phenytoin, lamotrigine, kana levetiracetam
Haasi ese emishonga iyi anofanirwa kudzivirirwa chaiko, asi iwo ese anofanirwa kutorwa nekungwarira kukuru uye nekutaurirana nachiremba kana mumwe mupi wezvehutano. Dzivisa kutyaira, mashini anoshanda, kana kuita zviitiko zvine njodzi kana uchibatanidza maviri kana anopfuura CNS zvinodzvinyirira.
Kugwinha ndiko kusadzora, kusarongeka, uye kudzokorora kupfura kwetunhu maseketi muuropi. Vanogona kutangira kubva pasingaonekwe kutenderera kwepfungwa kuenda kuzere-muviri kushushikana. Mune kiriniki zvidzidzo , pfari dzakange dziri mhedzisiro yeLatuda pamwero wakaenzana wavakange vari weiyo placebo, zvichiita kuti Latuda ive yakachengeteka mishonga yekurapa mishonga yekurapa. Zvakadaro, Latuda nemimwe mishonga yekurapa hunyanzvi inoderedza chikumbaridzo chekubata, ichiisa varwere panjodzi yepamusoro yekubatwa. Nechikonzero ichi, vatapi vezvehutano vanodzivirira kusanganisa Latuda nemishonga inogona kukonzera kubatwa kusanganisira Firdapse (amifampridine), Wellbutrin (bupropion), uye mamwe marudzi emishonga inoshandiswa kuX-ray kana imwe imaging.
Latuda inogona kudyidzana nemimwe mishonga uye mamiriro akadai se:
Maitiro ekudzivirira Latuda mhedzisiro
Antipsychotic yakadai seLatuda inowanzo kukonzera mhedzisiro. Dzimwe nguva, iyi mhedzisiro inokonzeresa varwere kuti varege kutora mushonga. Ramba uchifunga kuti ese antipsychotic zvinodhaka ndezvokutengeserana pakati pezvinowanzo batsira zvikomborero uye dzimwe nguva zvakaenzana zvakaipisisa mhedzisiro.
Tevedza aya matipi kana uchitora Latuda kuti uderedze njodzi yeLatuda mhedzisiro asi uchisimbisa kubatsirwa kukuru nekutora mushonga:
Tora Latuda sekurairwa
Tora muyero wezuva nezuva sekurairwa. Usawedzere kana kudzikisa dosi. Pamusoro pazvose, usatora zororo rezuva rimwe- kana maviri kubva kumushonga. Inofanirwa kutorwa zuva nezuva pamusoro penguva yakareba kuti ione mabhenefiti azere. Kana mushonga wacho uchiratidzika kunge usiri kushanda kana mhedzisiro yakanyanya kuoma kubata, taura kune wekutsanangudza mupi nezvekushandura dhizaini kana kuchinjira kumushonga mutsva.
2. Tora Latuda nechikafu
Latuda inofanira kutorwa nechikafu. Muchokwadi, inofanirwa kutorwa pamwe nekudya kweinenge mazana matatu emakoriori. Kunyangwe izvi zvisingakwanise kudzivirira mhedzisiro, zvinove nechokwadi chekuona iwo mabhenefiti kubva pakutora mushonga.
3. Udza mupi wako wezvehutano nezvese zvako zvekurapwa uye mishonga
Nekuda kwenjodzi yemhedzisiro, iwe unofanirwa kutaurira mupi wako wezvehutano nezve:
Chero mamiriro epanyama aungave uine, kunyanya
Yakakwira ropa shuga, chirwere cheshuga, kana metabolic syndrome
Nhoroondo yekubatwa kana pfari
Nhoroondo yezvikamu zveprolactin zvakakwirira
Chirwere cheParkinson kana zviratidzo
Chero kunwa doro, kushandisa zvinodhaka, kana nhoroondo yekushandisa zvinodhaka
Yese mishonga yauri kutora parizvino
All over-the-counter mishonga uye zvinowedzera zvaunowanzo tora
Gara uchitaura nemupi wako wezvehutano nezve chero mhedzisiro yaunowana pakutora Latuda kana chero imwe mishonga yemishonga.
4. Dzivisa doro, antihistamines, uye kuora mwoyo
Chero chinhu chinodzora huropi senge doro, mbanje, antihistamines, uye sedatives zvinowedzera kukuvadza uye kugona kukanganisa mhedzisiro yeLatuda, zvichikonzera njodzi yetsaona kana kukuvara. Paunenge uchitora Latuda, usatyaire, shandisa michina, kana kuita zviitiko zvine njodzi kusvikira iwe waziva kuti mushonga urikukukanganisa sei. Iri zvakare zano rakanaka kana uchitora kushungurudzwa kweCSS kwakadai saLatuda kubvisa zvipingamupinyi nenjodzi kubva mumba kutapudza njodzi yekukuvara netsaona.
5. Usadya grapefruit kana kunwa muto wemazambiringa
Muchero wemazambiringa uye muto wemazambiringa zvinorambidzwa pakutora Latuda. Muchero wemazambiringa une zvinhu zvinowedzera huwandu hwerurasidone inodhonzwa nemuviri, ichiwedzera njodzi uye kuomarara kwemhedzisiro yeLatuda. Mimwe mishonga uye zvinhu zvinogona zvakare kuwedzera kuwanda kweLatuda mumuviri, saka ita shuwa yekukurukura neanopa mupi mishonga yese, zvinowedzerwa, uye mishonga yemakwenzi iri kutorwa.
6. Dzivisa kupisa zvakanyanya
Latuda nemimwe mishonga inorwisa hunyanzvi inokanganisa kugona kwemuviri kugadzirisa tembiricha, ichiita kuti kupisa kukuru kuve nenjodzi. Dzivisa kupisa kana kupisa mvura ne:
majekiseni api andinoda kukoreji
Kugara mumba mukati mekupisa
Kudzivisa kunyanyisa kana kuwedzera-kurovedza muviri
Kudzivisa kuva muzuva kwenguva yakareba
Kunwa mvura yakawanda
Dzivisa doro-iro zvakare, rinovhiringidza kugona kwemuviri kugadzirisa tembiricha yemuviri
Lurasidone remubatanidzwa chidimbu , Raibhurari Yenyika yeMishonga
Lurasidone hydrochloride , PDR
Zviratidzo uye zvinoramba zvichisiya zviratidzo zvichitevera kuregedza kwemishonga yepfungwa , Psychotherapy uye Psychosomatics
Antipsychotic-inosanganisirwa huremu: manejimendi manejimendi uye kukanganisa pakurapa kutevedzera , Neuropsychiatric Chirwere uye Kurapa
Biochemistry, Cytochrome P450 , StatPearls
Zvinodhaka-zvinokonzerwa neshuga shanduko chikamu chechipiri: zvinodhaka-zvinokonzeresa hyperglycemia , Chirwere cheshuga Spectrum
Mishonga-inosimudzira hyperprolactinemia , Mayo Clinic
Kukosha kwekurapa kwejusi remuzambiringa uye kusangana kwaro nemishonga yakasiyana siyana , Nutrition Zvinyorwa
Dzidzira Nongedzo yeKurapa kweSchizophrenia , American Psychiatric Association
Kunonoka dyskinesia , StatPearls
Dulera vs Advair: Main Misiyano uye Kufanana
Ndeapi mhedzisiro yeXarelto kune vakwegura?
otc mushonga wehuro uye kuzara
izvo zviri nani viagra kana cialis kana levitra
zvakajairika kupfuudza kugwamba kweropa panguva yepamuviri
zvinorevei kana yako lactose isingashiviriri
kunonoka sei kuronga b kushandiswa